Kheyre oo soo saaray amarkii ugu fiicnaa oo uu Ra’isulwasaare ku amray wasiiradiisa! - Caasimada Online
Home Warar Kheyre oo soo saaray amarkii ugu fiicnaa oo uu Ra’isulwasaare ku amray...
Kheyre oo soo saaray amarkii ugu fiicnaa oo uu Ra’isulwasaare ku amray wasiiradiisa!
Muqdisho (Caasimada Online) – IlRa’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta Magaalada Muqdisho kasoo saaray amarkii ugu fiicnaa oo uu Ra’isulwasaaare Soomaaaliyeed ku amro wasiiradiisa.
Xasan Cali Kheyre ayaa soo saara\_y amar ku aadan in la tixgeliyo Luuqadda Soomaaliga isla markaasna laga hirgeliyo dhammaan wasaaradaha uu soo magacaabay.
Kheyre ayaa qalinka ku duugay maanta wareegto sheegeyso inay waajib ku tahay wasaaradaha oo dhan inay isticmaalaan luuqadda Soomaaliya isla markaasna ay dhammaan waraaqaha kasoo baxayo lagu qoro luuqadda Hooyo.
Wareegta uu Ra’isulwasaaraha Soomaaliya soo saaray ayaa lagu sheegay inuu amarkaan fuli doono isla maanta sidaasna wasaaradaha looga baahan yahay inay wixii hadda ka dambeeyo adeegsadaan luuqadda Soomaaliga.
Amarka Noocaan oo kale ah ayaa waxaa Ra’isulwasaaraha kaga horreeyey madaxwyenihii waqtigiisa dhammaaday Xasan Shiikh Maxamuud, kaasoo amray inaan la adeegsan karin waxaan luuqada Soomaaliga aheyn, sida la ogyahayna amarkaas ma uusan u fulin sidii la rabay, waxaana hadda laga war sugayaa sida uu u hirgalo amarkaan cusub.
Inta badan wasaaradaha Soomaaliya ayaa laga isticmaalaa luuqadda Ingiriiska, waxaana la rajeenayaa inay arrintaas soo idlaan doonto.